Maxkamad ku taalla Minnesota oo xukun ku riday laba dhalinyaro oo Soomaali ah
Minnesota:-Maxkamad ku taalla dalka Mareykanka ayaa xukun ku riday laba dhalinyaro oo Soomaali ah waxaana lagu eedeeyey in ay xiriir la lahaayeen Ururka Al-Shabaab .Labada muwaadin ee Soomaalida ah oo xukunka lagu riday ayaa diiday dhamaan eedeymihii ay maxkamada u soo jeedisay.
Maxakamada ku taal magaalada Minnesota ayaa waxaa la keenay Kamaal Saciid Xasan iyo Maxamuud Saciid Cumar oo in mudo ah ay socotay dacwadooda waxaana xeerilaaliyaha maxkamada uu ku dooday in Maxamuud Sacid Cumar loo heysto ilaa 5danbi halka Kamal Saciid Xasan loo soo jeediyey ilaa 3 danbi waxaana lagu xukumay 10 ilaa 20 sano oo xarig ah .
Qareenka u doodaya labada muwaadin ee Soomaalida ah iyo ehelada Kamaal Saciid Xasan iyo Maxamuud Saciid Cumar ayaa beeniyey in ay wiilashooda ay xiriir la lahaaayeen Ururka Al-Shabaab waxaana ay xukunka lagu riday ay sheegeen in ay racfaan ka qaadan doonaan iyaga oo ku tilmaamay xukunka Maxkamada mid dulmi ah.
Waxaa sidoo kale jira dhalinyaro iyo dumar u xiran dowlada Mareykanka iyaga oo ku eedeeyey in xiriir la leeyihiin Al-Shabaab ama ay lacag u direen oo xukun sugaya .
Soomaalida ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada Yurub iyo Mareykan ayaan lahayn Qareemo iyo Jaaliyado mideysan oo wajaha dhibaatooyinka soo wajaha waxaana ku xiran wadamada Yurub iyo Mareykanka Soomaali tiro badan oo loo heysto danbiye kala duwan.
C/fitaax Sheekh Ahmed